3.Aircelinta 70 Waxay u adeegi doontaa Million Rakaab ah! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3.Airport 70 Waxay U Bixineysaa Milkiilayaasha Milyan!
27 / 06 / 2016 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
3.Airport 70 wuxuu u adeegi doonaa Million Rakaab: Diyaaradda 3, oo dhismaheeda la filayo in mustaqbalka dhow la geyn doono, ayaa loo yaqaanaa garoonka ugu weyn adduunka oo leh astaamo qaarkood, waxaana loogu talagalay in lagu qaado 70 milyan oo rakaab ah meesha ugu horeysa.
Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) Maareeyaha Guud Serdar Hüseyin Yıldırım, ayaa qabtay hadalo muhiim ah oo ku saabsan ajendaha ka hor casho cunnada. Howlaha garoonka cusub 'waxay ku socdaan sidii loogu dhawaaqi lahaa Yıldırım, howlaha dhismaha kahor horumarka la qorsheeyay, ayuu yiri. Raiisel wasaare Binali Yildirim, ‘maddaarka wuxuu furi doonaa Febraayo 26 2018’ dhanka jihada dadaalada nooc kasta leh iyo feejignaan dhab ah oo muujineysa inay fulinayaan hillaaca, wajiga koowaad ee garoonka cusub ee la furay ayaa bixin doona labo waddo oo la yiraahdo. Yildirim wuxuu sheegay in marxaladda koowaad ay jiri doonaan labo marino isbarbar socda oo madax banaan isla markaana leh Terminal awood u leh 90 milyan. Fikradayda ayaa ah in 90 uu gaari doono tirada milyan ee rakaabka ah. 70. waxaan arki doonnaa waxoogaa koror ah oo ah 3 ka dib marinka wadooyinka.
Yildirim, iyadoo furitaanka gegada diyaaradaha cusub ee cirka ay la soo derseen Bulgaria iyo Romania, waxay tilmaameen in la wareystay, gaar ahaan Bulgaria waxay diyaar u tahay xaaladdan waxayna muujisay inay ku qanacsan tahay baaxadda taraafikada hawada, ayuu raaciyay. Yildirim ayaa sheegay in Boeing Jeppersen uu abaabulayo qaababka nidaamka garoonka diyaaradaha cusub. Hillaac, shaqada aasaasiga ee munaaraddan cusub ayaa bilaabatay, ayuu yidhi.
Maareeyaha Guud ee DHMİ Yıldırım, gawaarida aan duuliyaha lahayn ee aan duuliyaha lahayn si looga hortago adeegsiga xun ee wejigii ugu dambeeyay ee shaqada la qabtay, ayuu yidhi. Yıldırım wuxuu yiri, sistem Nidaamyo ayaa loo soo saaray si looga farageliyo garoonka si aysan u soo galin. Imtixaanadii aan ka soo qeyb galay waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan. ”
Yildirim, garoonka diyaaradaha Hakkari Yüksekova lama xiriin inta ay socdaan howlgalada ay wadaan ciidamada qalabka sida, laakiin duulimaadyada rayidka oo kaliya ayaa la joojiyay, ayuu yiri. Yildirim wuxuu sheegay in helikabtarro iyo diyaaradaha ambalaaska loo adeegsado in lagu daweeyo dhaawacyada, sidaa darteed waxay yiraahdeen waxay xireen garoomada diyaaradaha saacadaha 24.
Dumarku waxay doonayaan mareenka casaanka ah!